Ndị njem na-agbasa Coronavirus: Gorillas na Chimpanzees nọ n'ihe egwu?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị njem na-agbasa Coronavirus: Gorillas na Chimpanzees nọ n'ihe egwu?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • News • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
ozodimgba in rwanda
dere Apolinari Tairo - eTN Tanzania
Ugwu Gorillas na Chimpanzees bụ akụkụ dị mkpa ma na-enye ezigbo ego nke njem na njem njem na Rwanda, Uganda, Tanzania, na Congo. Ndị nchekwa na Africa na-echegbu onwe ha ịhụ Mountain Gorillas na Chimpanzees na Africa ka ekpughere Covid-19 site na ụmụ mmadụ na-eleta ebe obibi mbụ na Eastern na Central Africa.
The Ego Wwa Maka Okike (WWF) Adọọla aka na ntị na nso nso a banyere mgbasa nke Covid-19 na ugwu ozodimgba bi na Rwanda, Uganda, Congo, na mpaghara ọhịa oke ikuku niile dị na Africa.
Dika oria a na ebute oria ndi mmadu gburugburu uwa, ndi oru nchekwa di iche-iche na-adọ aka na nti banyere onodu ugwu ozor Africa.
Ewezuga ugwu gorillas, obodo Chimpanzee dị na Western Tanzania, Uganda, na akụkụ ndị ọzọ nke Central Africa ka a gụrụ na ha nọ n'otu ihe egwu site na ibute ọrịa Covid-19.
WWF dọrọ aka na ntị na ụmụ anụ ọhịa na-eso ụmụ mmadụ na-ekerịta DNA na pasent 98, na-ekwu na ụmụ anụmanụ nọ n'ihe egwu ibute ọrịa coronavirus.
Ogige Ntụrụndụ Virunga nke Congo na Rwanda gbara agbata nwere ndị njem iji chebe ozodimgba. Uganda emechighi ozodimgba ozodimgba ya, mana ọnụọgụ nke ndị ọbịa amabeghị ngagharị nke ndị mmadụ n'ogige ntụrụndụ.
Ọnụ ọgụgụ ozodimgba ugwu dị elu abaala karịa 1,000 na afọ ndị na-adịbeghị anya mgbe mgbasa ozi nchekwa gara nke ọma kemgbe afọ 30 gara aga, ọnụ ọgụgụ ha na-abawanye.
Onye okacha amara nke Patato na Africa Jane Goodall ekwuputala nchegbu ya banyere oria mgbasa Covid-19 site na mmadu rue umu.
O kwuru na London ụbọchị ole na ole gara aga na a maara Nnukwu enwe dị ka ndị nwere ike ịrịa ọrịa iku ume mmadụ. N'ebe nsọ ya maka chimps nwa mgbei, ndị ọrụ na-eyi ihe nchebe dị ka ịdọ aka na ntị megide COVID-19.
ugwu ozodimgba na Africa
Jane kwuru si "O bu nnukwu nsogbu n'ihi na anyi enweghi ike ichebe oria ndi a n'ofe Africa ma ozugbo nje butere ha, nke m na-ekpe ekpere na o gaghi adi, amaghi m ihe aga eme," Jane kwuru.
Rwanda na-emechikwa njem nleta na ọrụ nyocha nwa oge n'ogige ntụrụndụ mba atọ bụ ndị bi na primates dịka gorillas na chimpanzees.
Mountain gorillas nwere ike ibute ụfọdụ ọrịa iku ume na-emekpa ụmụ mmadụ ahụ́. A oyi oyi nwere ike igbu ozodimgba, WWF na-ekwu, otu ihe kpatara na anaghị anabata ndị njem nleta na-eso gorilla nso.
Ihe dị ka 1,000 gorilla ugwu bi na mpaghara ndị echedoro na Congo, Uganda, na Rwanda. Ikwe ka ọha mmadụ gaa ebe ndị a dị mkpa ma baa uru. Agbanyeghị, COVID-19, ọrịa nke coronavirus kpatara, dugara ndị ọrụ ogige Virunga inye iwu mmachi nwa oge.
Uganda ekwuputabeghi mmechi njem nlegharị anya nke ogige ozodimgba. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa si Europe na ebe ndị ọzọ belatara nke ukwuu, na-eme ka ogige ndị ahụ pụọ na-enweghị nnukwu ìgwè ndị njem nleta.
Kedu ihe kpatara Drones ji agba ụgbọ elu ụgbọ elu Korea? January 28, 2022
Seychelles na-eru uju ọnwụ nke onye bụbu osote onye isi ala Joseph Belmont January 28, 2022
Rwanda – Uganda Border Post mmeghe: ozi ọma maka ahia na njem nlegharị anya January 28, 2022
IATA: World Tourism Network mgbake nke ndị njem ụgbọ elu chọrọ January 28, 2022
Nke mbụ chili cheese keg January 28, 2022
Ọgwụgwọ anya nkụ nke mbụ site na teknụzụ nanomicellar January 28, 2022
Saịtị nke ihe nkiri egwu egwu ruru unyi na-anabata ndị ama ama “Ezigbo egwu egwu ruru unyi” January 28, 2022
Mweghachi akụkụ ụkwụ na-aga nke ọma na frogs ndị okenye na-eji ngwakọta ọgwụ ọhụrụ January 28, 2022
Mmanya mmanu okomoko nke Dọkịta nwanyị mebere January 28, 2022
Mgbasa ozi Lemonada nọ na ebumnuche ime ka ndụ ghara ịdị ntakịrị January 28, 2022
Kedu ndị toro eto kacha nọrọ n'ihe ize ndụ nke ọrịa cancer colorectal? January 28, 2022
Onye bụbu Pimp na-adọghachi azụ mkpuchi nke ndị na-ere ahịa ọgụ gbasara mmụọ na-akwụ ụmụaka ụgwọ January 28, 2022
Ụzọ ọhụrụ maka ịlele omume mmegharị n'ime ụmụaka nwere Autism January 28, 2022
Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-achọpụta ihe kpatara na ọgwụgwọ nke mkpirisi ọbara metụtara COVID-19 January 28, 2022
Njem na njem nlegharị anya: Ọ nweghị mkpa n'oge COVID-19? January 28, 2022
Barbados kwụsịrị na Royal Britain: na-ele anya Africa January 28, 2022
Ndị ụgbọ elu China nyere iwu ụgbọ elu Boeing 777 ọhụrụ anọ January 28, 2022
United ụgbọ elu mepere ụlọ akwụkwọ ụgbọ elu ya n'ihu ọha January 27, 2022
Enyí gburu ndị njem nlegharị anya Saudi Arabia na ogige ntụrụndụ Murchison Falls nke Uganda January 27, 2022
US gbakwunyere 'egwu nke ngwa agha ma ọ bụ ọgụ drone' na ndụmọdụ njem UAE January 27, 2022
Ụbọchị Ọhụrụ na Nassau: Akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian echegharịgharịrị na-esochi mgbanwe ọtụtụ nde dollar. January 27, 2022
European Union kwadoro ọgwụ COVID-19 mbụ January 27, 2022
Ndụmọdụ bara uru maka otu esi ede akwụkwọ mkpali January 27, 2022
Austria na-eme ka iwu mgbochi siri ike maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi January 27, 2022
Otu mmadụ iwe ji ọkụ gbaa ụgbọ oloko ọkụ n'India maka ule ụgbọ okporo ígwè arụrụ arụ January 27, 2022
Ala ọmajiji kpara Tonga ụbọchị ole na ole ka mgbawa ugwu gbawara agbawa January 27, 2022
Adịkwaghị 'ihe gbasara ọha na eze': Denmark kpochapụrụ mmachi COVID-19 ikpeazụ January 27, 2022